59 Tekirdag | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး59 Tekirdag
Tekirdag ရထားလမ်း, ကားလမ်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုသတင်း:
Tekirdağ Ring Road ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ၀ န်ကြီး Turhan Çorlu Ergene လမ်းခွဲထွက်ခြင်း
တူရကီ Grand National Assembly ဥက္က္ဌ ဒေါက်တာ Mustafa Şentopနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Cahit Turhan luorlu-Ergene တို့သည်Tekirdağကွင်းလမ်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ကြသည်။ Tekirdağ၌ရှိနေသောကြောင့်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်Şentopမိန့်ခွန်း၌ပြောကြားခဲ့သည် [ပို ... ]
Muratlıမီးရထားဘူတာရုံ Overpass တံတားပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဖွင့်လှစ်
TekirdağMuratlı, အထူးသဖြင့်မသန်စွမ်းသူများအနေဖြင့်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောမသန်စွမ်းသူများ၊ Muratlıမီးရထားဘူတာသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းကိုနောက်ဆုံးပြီးစီးခဲ့သည်။ တင်ဒါဖြင့် TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၊ [ပို ... ]
Corlu ရထားမတော်တဆမှုကြောင့်သူမ၏သားဆုံးရှုံးခဲ့ရသော Misra Oz Sel အပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု
luorlu ရထားမတော်တဆမှုကြောင့်သူမ၏သားဆုံးရှုံးခဲ့ရသော Mssra Öz Sel ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ငါတို့ကိုနောက်တဖန်မညှဉ်းဆဲ၊ ဤသည်ကားငါတို့၌ကိုယ်ဝန်မရှိ၊ luorlu ဘေးအန္တရာယ်ကိုလေ့ကျင့် [ပို ... ]
luorlu ရထားမတော်တဆမှုဖြစ်ရပ်ကိုNပြီလ 21 သို့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်
25 တရားခံ 3404တွင် 21 အတွက်အမှုစစ်ဆေးနေသည်။ ဇူလိုင် 2020 8 ကလေးသူငယ် 20187သည်Tekirdağပြည်နယ်ရှိ [ပို ... ]
Tekirdag မီးရထားပိုင်းဆိုင်ရာ Muratli ခရိုင်
Tekirdağ၏Muratlıခရိုင်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားသောမီးရထားလမ်း၊ ရထားလမ်းတစ်လျှောက်ခြံစည်းရိုးကို ဖြတ်၍ TekirdağရှိMuratlıခရိုင်၏အလယ်မှအလယ်သို့အလယ်အလတ်သို့နေထိုင်သူများအတွက်ကုစားနည်း [ပို ... ]
Corlu ရထား Crash အဓိကမေးခွန်း Ballast Wear ဘယ်လို?
Corlu ရထား Crash အဓိကမေးခွန်း Ballast ဘယ်လိုဝတ်ဆင်?;725၊4ကလေး၏အသတ်ခံရမှုရထားမတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်၍ luorlu တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် 10 တရားခံအမှုအားတတိယအကြိမ်တရားစွဲဆိုမှုကိုဒီဇင်ဘာလတွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ နယူးကျွမ်းကျင်သူအစီရင်ခံစာ [ပို ... ]
CHP Tekirdag လက်ထောက် Aygun ရထားမတော်တဆမှုများလျစ်လျူရှုထားခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်
ပါလီမန်စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ကော်မရှင်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီးဌာန 2020 ဘတ်ဂျက်သည် CHP Tekirdag လက်ထောက် Dr. hlhami Özcan Aygun၊ luorlu ရထားနှင့် Ankara အမြန်ရထားရထားမတော်တဆမှုများကိုအမှတ်ရလျက်၊ [ပို ... ]
သားဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးခဲ့သောမိခင်ထံမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးထံ Corlu ရထားမတော်တဆပေးစာ
sonorlu ရထားမတော်တဆမှုတွင်သူမ၏သား Arda Sel ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောမိခင် Myssra Öz Sel သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီး Cahit Turhan နှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများပါသည့်စာကိုရေးသားခဲ့သည်။ Sel သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီး Cahit Turhan Ulaştırmaအား 500 နေ့မှ စ၍ ပြောကြားခဲ့သည် [ပို ... ]
luorlu ရထားမတော်တဆမှုမှတစ်ဆင့်နှုတ်ထွက်ရန်တောင်းဆိုပါ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာန၏ 2020 ဘတ်ဂျက်ညှိနှိုင်းမှုများတွင်မိုက်ခရိုဖုန်းလက်ခံရရှိသည့်ရီပတ်ဘလီကန်ပြည်သူ့ပါတီ (CHP) TGNA စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ကော်မရှင်၊ Ilhami အပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ [ပို ... ]